Ciidamada nabadsugida NISA oo gaari walxaha qarxa ay saarnaayeen ku qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada nabadsugida NISA oo gaari walxaha qarxa ay saarnaayeen ku qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Ciidamada nabadsugida NISA oo gaari walxaha qarxa ay saarnaayeen ku qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
July 27, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Gaariga walxaha qarxa ay saarnaayeen. Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada nabadsugida dowlada Soomaaliya ee NISA ayaa howlgal ay xalay oo Talaado ahayd ka sameeyeen huteel kuyaala Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho waxay ku qabteen gaari walxaha qarxa iyo hub ay saarnaayeen.
Howlgalka ayaa yimid kadib markii ciidamada ay heleen in koox al-Shabaab ah ay ku dhuumanayeen huteel kuyaala suuqa Bakaaraha oo la dhaho Cimraan, sida ay sheegeen saraakiisha NISA.
Saraakiisha NISA oo la hadlay wakaalada wararka dowlada federaalka Soomaaliya ee Sonna ayaa sheegay in sidookale la qabtay dadkii gaariga lahaa oo looga shaki qabo kooxda al-Shabaab.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay oo u badan ciidamo ilaalo ah oo katirsan Amisom iyo Qaramada Midoobay kadib markii kooxda al-Shabaab ay shalay oo Talaado ahayd weerar is-biimayn ah ku qaaday xarunta Amisom ee Muqdisho.
July 3, 2016 Ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo fashiliyay weerar qarax gaari
August 24, 2016 Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay dagaalo ku dhexmaray gobolka Bay ciidamada DFS oo taageero ka helaya AMISOM iyo Al-Shabaab
July 27, 2016 Al-Shabaab oo sheegtay Saalax Badbaado oo horey xildhibaan DFS u ahaa inuu kamid ahaa kooxdii shalay weerarka is-biimaynta ah ka sameeyay Muqdisho
Al-Shabaab oo sheegtay Saalax Badbaado oo horey xildhibaan DFS u ahaa inuu kamid ahaa kooxdii shalay weerarka is-biimaynta ah ka sameeyay Muqdisho
RW Sharmaake oo Maxamed Aadan Jimcaale u magacaabay agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya
At least 30 people died in Bakool region due to drought
Mogadishu-(Puntland Mirror) Nearly 30 people have died in Bakool region of Southern Somalia due to drought in the past few days, an official confirmed. Senator Hussein Sheikh Mohamud, who hails from the region, said the [...]
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federal ee Soomaaliya oo ka gaabsaday xilliga ay dhacayaan doorashooyinka dalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federal ee Soomaaliya ayaa ka gaabsaday xilliga ay dhacayaan doorashooyinka dalka. Cumar Maxamuud Cabdule oo shir saxaafadeed ku qabtay caasimada Soomaaliya, Muqdisho ayaa ka hadlay howlaha shaqo ee guddiga [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in ay 62 maleeshiyo ah ku dileen lix duqeymood oo Sabtidii iyo Axadii ka dhacay deegaanka Gandarshe oo kuyaala gobolka Banaadir. Taliska Mareykanka ee Afrika [...]